Tag: njikọ endin
Sunday, October 11, 2015 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Ihe omuma a sitere na SalesforLife lekwasiri anya otu esi ejiko profaịlụ LinkedIn maka ire. Ọ dị mma, n'uche nke m, profaịlụ ọ bụla LinkedIn kwesịrị ịkwalite maka ire ya… ma ọ bụghị gịnị mere ị ji nọrọ na LinkedIn? Uru gị n'ọrụ gị bara uru dị ka netwọkụ ọkachamara gị. Nke ahụ kwuru, ekwenyere m na ọtụtụ mmadụ na-emebi ma ọ bụ na-eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi ma ọ bụ na-enweghị ike ịkwalite profaịlụ LinkedIn ha. Otu omume m ga-achọ ịkwụsị